Wasaaradda Gargaarka iyo Maareynta Masiibooyinka JFS iyo Hay’adda UNHCR oo ka wada hadlay Arrimo badan oo ay ka mid tahay u gargaarida Dadka bacakacayaasah. | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Wasaaradda Gargaarka iyo Maareynta Masiibooyinka JFS iyo Hay’adda UNHCR oo ka wada...
Wasaaradda Gargaarka iyo Maareynta Masiibooyinka JFS iyo Hay’adda UNHCR oo ka wada hadlay Arrimo badan oo ay ka mid tahay u gargaarida Dadka bacakacayaasah.
Kulan fogaan arag ah oo dhexmaray wasiirka wasaaradda Gargaarka iyo Mareeynta masiibooyinka XJFS Xil. Khadiija Maxamed Diiriye iyo masuuliyiinta UNHCR oo ku aadanaa arrimaha bini’aadanimo ee Soomaaliya ayaa lagu gorfeeyay arrimo ay ka mid yihiin Qaxootiga, Barakacayaasha, Roobka Deyrta iyo Raadadkii ay reebeen fatahadihii dalka ka dhacay.
“UNHCR waxaan isla garanay in daryeel dhab ah la siiyo dadka banaanka joogo ee xaalad walba u nugul waqtigan Dowladda Soomaaliya waxa ay soo dhaweyneysaa cid walba oo kala qeyb qaadaneyso daryeelka dadka Soomaaliyeed, Weli waxaa muuqdo raadadkii fataahaadda, Roobkii Deyrta ayaa lagu guda jiraa, iyadoo qaar badan oo dadkeena ah ay wajahayaan xaaladdo adag.” ayay tiri Wasiirad Khadiijo.
Previous articleMas’uulinta Safaarada Soomaaliya ee K/Afrika oo Socdaal wacyi galin ah oo ay kula hadlayso Jaaliyada Soomaaliyeed ka bilowday Gobolada Dalkaasi+(SAWIRRO).
Next articleWasiirku-Dowlaha Wasaaradda Waxbarashada, JFS oo kulan la qaatay Maamulada Dugsiyadda ay gacanta ku hayso Dowlada Federalka.